मन खोलेर रुनु दिमागलाई शान्त बनाउने एक माध्यम « Drishti News – Nepalese News Portal
मन खोलेर रुनु दिमागलाई शान्त बनाउने एक माध्यम
३१ चैत्र २०७७, मंगलबार १० : २१ मा प्रकाशित
अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा १६.५ ग्यालोन आँसु झार्ने गर्छन् । तर कहिलेकाँही मानिसहरु आफ्नो भावनालाई दबाउन खोज्छन्, यसलाई उजागर गर्न लजाउँछन् पनि ।
यदि भावनात्मक रुवाईले तपाईंलाई तौल घटाउन सहयोग गर्छ भन्दा कस्तो लाग्ला ? यो सुन्ने बित्तिकै कतिलाई लाग्न सक्छ कि आफूले थुप्रै वर्षदेखि दबाएर राखेको आँसुको ग्यालोन खन्याउने बेला आएको छ ।
हामी तनावमा हुँदा कार्टिसोल हर्मोनको श्राव हुन्छ जुन मोटोपनासँग सम्बन्धित हुन्छ । हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ कि यो हर्मोनले तनावसँग जुध्न सहयोग गर्ने ब्राइट साइडले उल्लेख गरेको छ ।
यहाँ समस्या के छ भने आजकाल मानिसहरु जीवनयापनका लागि शारिरिक क्रियाकलाप गर्दैनन् । मानिसहरु तनावमा हुँदा र रिस उठेका बेला बसिराख्न रुचाउँछन् त्यसकारण हाम्रो शरीरले तनाव कम गर्ने केही क्यालोरीको उपयोग गरिसकेको ठान्छ । यद्यपी, त्यसको प्रयोग नभएको पनि हुनसक्छ ।
वैज्ञानिकका अनुसार भावनामा बगेर रुने सबैभन्दा राम्रो समय भनेको बेलुका सात देखि १० बजेसम्म हो । यतिबेला मानिसहरु आफूलाई मनपर्ने मानिसको साथमा हुन्छन् । जीवनको निकै कठिन अवस्थामा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई बाहिर निस्कन दिनुहोस् । मन खोलेर रुनु दिमागलाई शान्त बनाउने एक माध्यम पनि रहेको अनुसन्धानकर्ताहरुको भनाई छ ।
कसरी गर्ने हातको स्याहार ?
मानिसको सुन्दरतामा अनुहारसँगै अन्य अंगको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । त्यस मध्येको एक हो, हात